Free Game များစွာနဲ့ Rooster In Love Slot - Myanmar Online Game
ဒီနေ့မှာတော့ ကြက်မလေးကို ချစ်လွန်းလို့ ပိုးပမ်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ကြက်ဖလေး Slot အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒီ Slot ကစားနည်းလေးက Free Game ရနိုင်ခြေလည်းများပြီး တရုတ်ရိုးရာ အငွေ့အသက်အပြည့်ပါနေပြီးတော့ ကျက်သရေရှိတဲ့ Symbol တွေ အချစ်တွေပြည့်နေတဲ့ ကြက်ဖနဲ့ ကြက်မ အတွဲလေးကို အဓိကယူထားတာပါ။
ကံကောင်းခြင်း Symbol ဖြစ်တဲ့အလျောက် ဒီကစားနည်းမှာ ကစားသူတွေက ရနှုန်းမြင့်တဲ့ Symbol တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ Line အပြည့်ကိုလှည့်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်!
ဒါ့အပြင်ကို Free Game လှည့်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် “A, K, Q, J, 10, နဲ့ 9” တို့လိုမျိုး ပြန်ရမှတ်နည်းတဲ့ Symbol တွေလုံးဝမပါတော့ဘူးနော်! လုံးဝကို ပြန်ရမှတ်များတဲ့ Symbol တွေနဲ့ပဲပြည့်နှက်နေမှာမို့ အရမ်းကိုစိတ်ကျေနပ်ပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ခံစားမှုကိုရမှာတော့ အသေအချာပါပဲ။ အဲ့လို Symbol တွေအပြည့်ပေးလို့ Grand Prize ကိုလျှော့ထားလားဆိုတော့လဲ x4800 အထိတောင်ပေးထားတာနော်!!!
အဲ့တာကြောင့် အချစ်တွေ ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ Rooster In Love Slot ကိုဘယ်လိုကစားရမလဲ လေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်…
5 Reel Spin တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲ Symbol တွေကိုဘယ်မှညာရေတွက်ပြီးတော့ အနိုင်အားလုံးအတွက်ကို 1 Credit Bet တွက်ပါတယ်။ Free Spin Bonus ကိုတော့ ရွှေကြာပုံလေးနဲ့ ကိုယ်စားပြုထားပြီးတော့ Symbol အရေအတွက်လိုက် ပြန်ရမှာတွေကိုတော့3ခုကို 5,4ခုကို 10,5ခုကို 50 ဖြစ်ပြီးတော့ ကိုယ်ထည့်ထားတဲ့လောင်းကြေးနဲ့မြှောက်သွားမှာပါ။ Wild ကိုတော့ အသည်းပုံ Symbol နဲ့ကိုယ်စားပြုထားပြီးတော့ Reel 2, 3,4တို့မှာပဲပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Wild ကတော့ ကျတဲ့နေရာမှာ လိုသလိုသုံးလို့ရတာမို့ ဖဲကစားနည်းမှာဆို Joker နဲ့ဆင်တူပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ သူအစားထိုးပေးတဲ့ထဲမှာ Free Spin Bonus တော့မပါဘူးပေါ့နော်။
Free Spin Symbol ဖြစ်တဲ့ ရွှေကြာ3ခုနဲ့အထက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Free Spin Bonus 10 ခါရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကစားနည်းမှာအရမ်းမိုက်တဲ့အချက်ကတော့ Free Spin လှည့်နေတဲ့အချိန်မှာ တန်ဖိုးနည်း Symbol တွေဖြစ်တဲ့ A, K, Q, J, 10,9တို့လုံးဝမပါဝင်တာပါပဲ! အဲ့တော့ Free Spin ရလိုက်တာနဲ့ တန်ဖိုးကြီး Symbol တွေပဲကျန်ခဲ့တော့မှာမို့လို့ ကံကောင်းပြီလို့သာမှတ်လိုက်ပါတော့! Free Spin လှည့်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ Free Spin Bonus ကိုမဖျောက်လိုက်ပါဘူးနော်။ Free Spin လှည့်နေရင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ Free Spin Symbol ထပ်ကျမယ်ဆိုရင် Free Spin တွေထပ်ပေါင်းထည့်သွားမှာပါ။ အများဆုံး 200 အထိတောင်ပေါင်းထည့်ခွင့်ပေးထားတာနော်!
Free Spin Bonus ရသွားပြီဆိုရင်တော့ အောက်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ Slot ကအလန်းစား Free Spin Slot အသစ်ကိုပြောင်းသွားမှာပါ!
A, K, Q, J, 10,9တို့မဟုတ်ပဲ တန်ဖိုးကြီး Symbol တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုရင်တော့ ကစားနည်းရဲ့နာမည်နဲ့အညီ တန်ဖိုးအကြီးဆုံးကတော့ Rooster ကြက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးကတော့ ဒေါင်းစုံတွဲ၊ နောက်ထပ် ရေပေါ်ကငှက်စုံတွဲ၊ သစ်ကိုင်းပေါ်မှာ ခိုးနားနေတဲ့ ငှက်စုံတွဲ။ သီချင်းဆိုပြီးကခုန်နေတဲ့ ငှက်အတွဲ တွေကတော့ အစဉ်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ Rooster လေးတစ်ခုထဲ စုံတွဲမဟုတ်ပဲ ပိုးပမ်းနေရတုံးမို့လို့ အဖော်မဲ့နေတာပါနော်။
ကဲ.. အဲ့တော့ Grand Prize x4800 အထိရနိုင်မယ့် အချစ်တွေ ကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ Slot ကစားနည်း Rooster In Love ကိုကစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? တစ်ကယ်တမ်းပြောရရင် ဒီ Slot ကတော်တော်လေးကို Player ဘက်ကိုဦးစားပေးပြီး စိတ်ကျေနပ်တဲ့ Feeling တစ်ခုရဖို့အတွက်ကို အာရုံစိုက်ထားတဲ့ Slot လို့ပြောရမယ်ဗျ! ဒါကြောင့်လဲ JDBYG ရဲ့ “ယနေ့အနိုင်ရသူ” စာရင်းထဲမှာ Rooster In Love က အမြဲအလိုလိုပါနေတာပေါ့ဗျ။ အဲ့တာကြောင့် Rooster In Love ကိုကစားဖို့အတွက် JDBYG ရဲ့ Slot စာရင်းကို အခုပဲအပြေးလှမ်းလိုက်တော့နော်!!